Izenzo zabo ngeke ziwayise phambili amaqembu abo - Impempe
Izenzo zabo ngeke ziwayise phambili amaqembu abo
January 14, 2021 January 14, 2021 Impempe.com
Ngabe uMpengesi weChippa noSukazi weGalaxy bahlobene? Ngihlale ngiyisho le nto yokuthi cishe sonke sihlobene emhlabeni kaJehova kodwa lokho kusuke kungasho ukuthi angiwuhloniphi umlando wezibongo wabantu base-Afrika.
Uyabona nje ubufakazi balokho ukuthi sengike ngafaniswa nenqwaba yabantu futhi ngiyazi ukuthi akumina ngedwa enginaleyo nkinga. Ngesikhathi kukhona idlanzana elalithi ngifana noSlikho (kazi ubhalwa kanjena yini Nkosi yami lo mculi) kwadingeka ukuthi ke ngiyobheka izithombe zale ndoda ngoba ngangingayazi nhlobo.
Phela uSlikho wakhona lowo ungemuva impela kimina ngeminyaka, ngakho ayemancane kakhulu amathuba okuthi ngimazi mina nomculo wakhe. Namanje ngeke ngiphumele obala ngithi babeqinisile labo ababesho kanjalo, nomake babeshaya eceleni kodwa engingakusho ukuthi uma begcizelela ukuthi uSlikho nami sinenswebu kumele bacacise lokhu okulandelayo. USlikho kungamele kuthiwe kuyena: wena ufana nomfoka Ndlovu. Phela yimina owabona ilanga kuqala kunoSlikho ngakho ngeke kuthiwe mina ngifana naye, uyena ongafana nami.
Bakhonake nabanye abafana ngezenzo okuphinde kucishe kufakazele yona le nkolelo yami yokuthi singabandawonye sonke. Uthole umuntu izenzo zakhe zifana ncamashi nezomuntu ongahlobene nakancane naye. Nakho lokhu sekuke kwangenza kodwa angifune kunkanta manje, kumele ngihlale odabeni. Uma nikhononda ngokunkanta kwami kumele nikubhekise kulabo abangifundisa ukubhala. Uyabona abantu abafana noThulani Mbatha, esasebenza naye isikhathi eside kwelinye lamaphephandaba esiZulu ahlonishwayo, bangifaka shi ekunkanteni.
Lapho ngiqonde khona yilaphake. Kunezinkunzimalanga ezifana ncamashi ngezenzo emaqenjini eDStv Premiership. Uyazi kulezi zinsuku ngike ngazibuza ukuthi ngabe laba ababili abahlobene yini. Lapha ngikhuluma ngoSiviwe “Chippa” Mpengesi, ongusihlalo weChippa United noTim Sukazi, usihlalo weTS Galaxy. Ngabe bahlobene laba bantu?
Indlela ezenza ngayo izinto lezi zinkalakatha ifana ncamashi. Ungafunga ukuthi bobabili laba babhemu bakuyela eNyuvesi ukungabekezeli nokusheshe baxoshe. EkaMpengesi yona yindaba engiyoyixoxela ngisho abazukulu uma ngingagcineka ngize ngifike kulelo zinga. Phela uMpengesi usesebenzise abaqeqeshi abangu-28 bonke kumasizini alinganiselwa kwayisishiyagalombili iqembu lidlala ezingeni eliphezulu. Hawu madoda! Inqwaba engaka yabaqeqeshi!
USukazi ubukeka ebukela kuMpengesi naye uma kubhekwa izinto ezenzeka eqenjini lakhe kule sizini. Kuthe uSukazi uma exosha umqeqeshi uDan Malesela ngoDisemba, wathi uMpengesi ngeke ahlulwe umuntu obukela kuyena ngokuxosha, wachitha uLehlohonolo Seema. Uyabona nje kuyacaca ukuthi la madoda awakwazi ukubekezela womabili njengoba uSukazi ebambise uZipho Dlangalala imidlalo emibalwa kodwa wagcina emchithile waqasha u-Owen Da Gama. IsiMpengesi lesi ubukeka esizwa ngaphakathi uSukazi.
Okungixaka ngalaba baphathi bamaqembu ukuthi bona abayicabangi yini indaba yokuthi umqeqeshi kumele azinze ukuze aliqonde kahle iqembu lakhe. Ukuzinza komqeqeshi kusuke kusho kona ukuthi imiphumela izoqale ingahambi kahle kodwa ekugcineni izinto zibuye zihlangane. Ngake ngakusho ukuthi uMpengesi kumele ake abukele emaqenjini athathwa njengamakhulu eNingizimu Afrika, iKaizer Chiefs, Orlando Pirates neMamelodi Sundowns. Akuvele kuxoshwe nje kula maqembu ngoba osihlalo bakhona bayayazi into abayenzayo.
Ngiyafunga ngiyagomela ukuthi ukube usihlalo weChiefs uMpengesi noma uSukazi, ngabe kade lagcwala umoya kuGavin Hunt njengoba izinto zingahlangani kahle eNaturena. Nokho kuyahlaluka ukuthi uKaizer Motaung uyalazi ibhola ngoba nangu uHunt usekhona.
Ngiyabona ukuthi uMpengesi noSukazi abayingeni indaba yokulinda amathonsi abanzi uma imiphumela ingaqhamuki ngendlela abafuna ngayo emaqenjini abo. Kodwa la madoda kumele afunde ukubekezela ukuze amaqembu awo akheke, aqine njengamanye afana noSuperSport United neLamontville Golden Arrows, asehlale isikhathi eside nabaqeqeshi bawo.
Mhlawumbe ngelinye ilanga siyozwa ukuthi kukhona ongumshana womunye nomake umzala omunye, phakathi kukaMpengesi noSukazi. Angimane ngibasukela nje ngokubafanisa ngezenzo zabo, bayizithupha ziya egwayini. Shwiii
Previous Previous post: Uncoma impatho ngokudlula irekhodi lamagoli kuMatsatsantsa uGrobler
Next Next post: Azoyivula ngelula awaseSoweto iNedbank Cup njengoba eqhathwe naweGladAfrica Championship